Salons and Spas - Yangon Thu Michelle Video
Beauty, Video Apr 06, 2018
မိန်းကလေးတွေရဲ့ ဘဝတစ်လျှောက် အလှအပထိန်းသိမ်းရေးခရီးမှာ ဆံပင်အရောင်ဆိုးတာက အရေးပါပါတယ်။ အနည်းဆုံး တစ်ကြိမ်တော့ ဆိုးကြမှာပါ။ ဆံပင်ဆိုးပြီးရင် ပြောတဲ့အတိုင်းထွက်တာက ခပ်ရှားရှား။ ပြောတာတခြား ဖြစ်လာတာတစ်ရောင်။ တစ်ခါတစ်လေ hair stylist က သူ့ဆိုးပေးချင်တဲ့ အရောင်ပဲဆိုးပေးတယ်။ ဆံပင်ရှည်ရင် ရှည်သလောက် ပေးရသေးတယ်။ စျေးကြီးရင် ရင်ထဲမှာ ….. ဆို့ …….နင့် …. ခံစားရသေး။
တစ်နှစ်တစ်ခါလောက်ပဲ ဆံပင်ဆိုးတဲ့ မီရှဲအတွက်တော့ ရွေးတဲ့အရောင်အတိုင်းထွက်လာတာကိုပဲ ကြည့်ကြည့်ပြီး ပီတိတွေဖြာ …….။ ဆံပင်လည်း ဖွာတာ၊ ပျက်စီးတာ မရှိလို့ ဝမ်းသာအားရ ကျေနပ်နေရတယ်။ နောက်တစ်ခုက ဒီလို ဗီဒီယိုတွေရိုက်ရင် ဆိုင်တွေက မကြိုက်ချင်ဘူးရယ် ….။ ပိုက်ဆံပေးရိုက်ရတာ၊ ခွင့်ပြုမိန့်တင်ရတာ အတော်အလုပ်ရှုပ်တယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း အလှဆုံး စိတ်တိုင်းကျအောင် လုပ်ပေးတဲ့ Kevin Gim၊ တစ်ဆိုင်လုံး ရှုပ်ယှက်ခက်အောင် ရိုက်ကူးရေးလုပ်ပေမဲ့လည်း အပြုံးမပျက်တဲ့ The K Salon နဲ့ Htet Hlang ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ ….
ဆံပင်လည်းဆိုးပြီးရော …. Spa ဆက်လုပ်ချင်တာနဲ့ ချစ်သူကိုပါခေါ်သွားလိုက်တယ်။ မဟုတ်ရင် စောင့်နေပေးပေမဲ့လည်း အကြာကြီးစောင့်ရင် ပျင်းနေမှာစိုးလို့ သူ့ပါလုပ်လို့ရတဲ့ဆိုင်ခေါ်သွားလိုက်တယ်။ မလုပ်ချင်ဘူး ကဂျီကကြောင်လုပ်နေလို့ အတင်းဆွဲခေါ်ရသေးတယ်။
နှစ်ယောက်လုံး လုပ်လို့ရအောင် ခြေ လက် spa၊ မျက်နှာ treatment လုပ် ပေါင်းတင်၊ ခေါင်းလျှော် ပါတဲ့ mini spa package ကိုပဲ ရွေးလိုက်တယ်။ ခြေသည်း လက်သည်း သန့်ရှင်းရေးလုပ် ပေါင်းတင်ပြီးတော့ အသားတော်တော်ညိုတဲ့ ချစ်သူတောင် ဖြူပြီးသန့်သွားတယ်။ ခေါင်းမလျှော်ခင် ဘယ်ခေါင်းလျှော်ရည်နဲ့ လျှော်ရမလဲ စက်နဲ့ သေချာစမ်းပြီးမှ လျှော်ပေးတော့ တစ်ပတ်လောက် ခေါင်းမလျှော်လဲ ခေါင်းကသန့်နေတယ်။ မျက်နှာကို သေချာချေး(ဂျီး)ချွတ်၊ ပေါင်းတင်၊ နှိပ်ပေးတာလဲ ဇိမ်ပဲ။
နှစ်ယောက်သား တူတူဘေးချင်းယှဉ် spa လုပ်ရတော့ ထွေရာလေးပါးလျှောက်ပြော၊ ဟိုအကြောင်း ဒီအကြောင်းပြောနဲ့ သာယာကြည်နူး တစ်တီတူးပဲ။ ပုံမှန်က ဘာစားရင်ကောင်းမလဲပဲတွေးပြီး စားပဲ စားမိနေတော့ ဝိတ်တွေတက်လာတာ မြင်မကောင်းဘူး။ ပိုက်ဆံကုန်ရတာချင်းတူတူ ဒါမျိုး Spa တူတူလုပ်ကြည့်ပါလား။ နေပူထဲ လျှောက်သွားပြီး အသားမည်း၊ အစားတွေ ပတ်စားရင် ဝလာမဲ့အစား ဒီလိုပိုက်ဆံသုံးပြီး လုပ်ရတာလည်း activity တစ်မျိုးပဲ။ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရမှာ ပျင်းတဲ့ ချစ်သူရည်းစားဆို ချေး(ဂျီး)ပြောင်သွားတာပေါ့။
ဂရုတစိုက်နဲ့ service ပေးရုံသာမက ရိုက်ကူးရေးအတွက်လိုအပ်သလို ကူညီပေးတဲ့ Catherine & Co. Salon & Cafe & Spa နဲ့ Poe Aung ကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
One advantage of beingagirl is you have lots of options for salons and spas. I also think bringing your boyfriend to spa is chance to spend time together. So I took my boyfriend to do foot cleansing and spa. The Salons I choose is The K Salon Yangon Branch and Spa is Catherine & Co. Enjoy …!
Proudly brought to you by Smart Lion Group Of Companies
#ရန်ကုန်သူမီရှဲ #yangonthumichelle #Salon_Spa